Deg deg Raiisal wasaaraha cusub oo lagu dhawaaqay? - iftineducation.com
iftineducation.com – EXCLUSIVE-Tan iyo markii uu xilka raiisalwasaarenimada banneyay raiisal wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed waxaa dadka indha indheeya siyaasadda Somaaliya ay indhaha ku hayaan cidda uu madaxweynuhu u soo magacaabayo xilkan.
Illaa saddex siyaasi ayaa la sheegay in todobaadkaan ay ku soo hareen gacanta madaxweyanaha kuwaasoo mid waliba uu isagu doonayay inuu qabto jagadaas , waxaana ka mid ah saddexdaaas siyaasiga Xuseen Cabdi Xalane oo isagu ahaa wasiirkii maaliyadda xukuumadda Raiisal wasaare Cabdiweli Sheeekh Axmed Maxamed ninkaasoo ah siyaasi soo qabtay xilka raiisal wasaare ku xigeen isla markaana maqaam sare ka gaaray hay,adaha UNka, Xuseen waxaa la sheegaa in ay saaxiib dhaw yihiiin Madaxweyanah Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Ninka labaad waa siyaasiga Cumar Cabdirashiid Calioo isagu horey u soo qabtay xilkaan waxaana xilligaan uu yahay danjiraha Soomaaliya u fadhiya USA , waa siyaasi qeyb weyn ka soo qaatay dhismaha maamulka Jubba-land
Shaqsiga sadexaad waa Axmed Cawad Ciise, ninkaan waa qurba joog wax ku soo bartay dalka Mareykanka waxaana uu la taliye u soo noqday raiisal wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax.
Haddaba warar lagu kalsoonan karo oo ka soo baxaya xafiiska madaxweynaha ayaa waxay sheegayan in maanta galinka dambe uu madaxweynuhu ku dhawaaqi doono shaqsiga uu u soo xushay inuu qabto xilkaan , waxaana wararku sheegayan in la tashiyo badan oo uu sameeyay la isku afgartay in Cumar Cabdirashiid oo haatan ah Danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Mareykanka uu noqdo ninka qabanaya xilkaan.
Cumar maanta galinka hore ayaa la filayaa inuu soo gaaro magaalada Muqdisho isagoona toos uga yimid dalka Mareykanka waxaana uu soo maray magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya.
Waxay noqoneysaa markii labaad ee Cumar CabdiRashid uu qabto jagada raiisal wasaaraha Soomaaliya